Show All Most Popular Cutlery Traditional Myanmar Set Menu Curry & Rice Traditional Snacks Traditional Desserts
Traditional Myanmar Set Menu
Kandawgyi Nature Park,, Yangon, MM Mingala Taungnyunt
Monhinga (မုန့်ဟင်းခါး) (မုနျ့ဟငျးခါး)
Traditional Burmese rice noodle in minced fish gravy, served with assorted condiments."
Fragrant Coconut Rice and Braised Mutton Curry (အုန်းထမင်း နှင့် ဆိတ်သားနှပ်)(အုနျးထမငျး နှငျ့ ဆိတျသားနှပျ)
Hearty Cream Tea with Baby Ei Kyar Kway (မလိုငျလကျဖကျရညျနှငျ့ ဘဘေီအီကာကှေး) (မလိုင်လက်ဖက်ရည်နှင့် ဘေဘီအီကာကွေး)
A delicious Myanmar style tea with extra clotted cream
Lentil Rice with Sauteed Prawn (ပဲထမင်းနှင့်ပုဇွန်ဟင်း) (ပဲထမငျးနှငျ့ပုဇှနျဟငျး)
Nga Pyaw Paung (အုနျးနို့အနှဈဌကျပြောပေါငျး) (အုန်းနို့အနှစ်ဌက်ပျောပေါင်း)
Steamed banana with coconut milk.
Steamed Fish + Spicy Shrimp Paste Dipping Sauce with Seasonal Assorted Vegetables Dipper (ငါးသလောကျပေါငျး၊ ငါးငပိရညျဖြျော၊ တို့စရာအစုံ) (ငါးသလောက်ပေါင်း၊ ငါးငပိရည်ဖျော်၊ တို့စရာအစုံ)
Coconut Noodle (အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ) (အုနျးနို့ခေါကျဆှဲ)
Thick coconut soup with chicken and noodle.
Glaze Red Pork Curry + Spicy Shrimp Paste Dipping Sauce with Seasonal Assorted Vegetables Dipper (ဝကျသားနီခကျြ၊ ငါးငပိရညျဖြျော၊ တို့စရာအစုံ) (ဝက်သားနီချက်၊ ငါးငပိရည်ဖျော်၊ တို့စရာအစုံ)
Ponyegyi Rice Salad with Grilled Chicken (ပုန်းရည်ကြီး ထမင်းသုပ်နှင့် ကြက်ကင်) (ပုနျးရညျကွီး ထမငျးသုပျနှငျ့ ကွကျကငျ)
Fried Chicken + Fried Roselle + Spicy Shrimp Paste Dipping Sauce with Seasonal Assorted Vegetables Dipper (ကွကျသားကွျော၊ ခဉျြပေါငျကွျော၊ ငါးငပိရညျဖြျော၊ တို့စရာအစုံ) (ကြက်သားကြော်၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ငါးငပိရည်ဖျော်၊ တို့စရာအစုံ)
Grilled Fish & Yellow Rice (ရှမ်းငါးကင်နှင့်ထမင်းဝါ) (ရှမျးငါးကငျနှငျ့ထမငျးဝါ)
Croquette Potato with Prawn (ပုဇွန်အာလူးကတ်တလိတ်)(ပုဇှနျအာလူးကတျတလိတျ)
Deep fried stuffed croquette potato with prawn and homemade spicy tamarind sauce
Si Htamin (ဆီထမင်း)(ဆီထမငျး)
Golden sticky rice with grilled sundried snake headfish with peanut oil.
Traditional Style Pounded Tea Leaf with Chili & Garlic with Mixed Fried Bean (လကျဖကျဆိမျ့နှပျဆီစိမျနှငျ့ အကွျောစုံ)(လက်ဖက်ဆိမ့်နှပ်ဆီစိမ်နှင့် အကြော်စုံ)